Xoghoose.com Iyo Warar Xaqiiqo Ah » Man Utd oo isha ku heysa inay heshiis ilqabad leh kula soo wareegto Marco Asensio, qiimaha heshiiskaan iyo mushaarka la siin doono!Xoghoose.com Iyo Warar Xaqiiqo Ah
Man Utd oo isha ku heysa inay heshiis ilqabad leh kula soo wareegto Marco Asensio, qiimaha heshiiskaan iyo mushaarka la siin doono!
Manchester United ayaa isku diyaarineysa inay jebiso rikoorkeeda suuqa kala iibsiga ciyaartoyda si ay ula soo saxiixato weeraryahanka dhallinyarada ah ee kooxda Real Madrid Marco Asensio.
Tababare Jose Mourinho ayaa haatan indhaha ku haya xiddiga Real Madrid Marco Asensio, Man United ayaana isku diyaarineysa inay dalab 177 milyan oo ginni ah ka gudbiso 21 sanno jirkaan, sida laga soo xigtay shabakadda Don Balon ee dalka Spain.
Marco Asensio ayaa sidaas ku noqon doona laacibka ugu qaalisan taariikhda Man Utd, isagoo ka sarre mari doona Paul Pogba oo ay 89 milyan oo ginni kula soo saxiixatay xagaagii 2016kii.
Warbixintaan ayaa sheegeysa inuu tababaraha reer Portugal Mourinho si weyn isaga dhaadhiciyey inay Man Utd lasoo saxiixan doonto Asensio, isla markaana uu xiddiga reer Spain noqon doono mid ka mid ah xiddigaha ugu fiican kubadda cagta sannadaha soo aadan.
Shabakadda Don Balon ayaa sidoo kale sheegeysa inay Man Utd Isbuucii mushaar ahaan u siin doonto Asensio qiimo lacageed dhan 461 kun oo ginni, oo u dhiganta 24 milyan oo ginni xilli ciyaareed kasta.
Kooxda ka dhisan Old Trafford ayaana xagaaga soo aadan isku diyaarineysa inay Asensio kasoo qaadato Real Madrid, xiddigaan qaab ciyaareedka wanaagsan ku jira ayaa dhaliyey afar gool caawiyeyna laba gool sideed kulan oo uu kusoo bilowday xilli ciyaareedkaan.